Shiinaha Yurub oo tayo buuxda leh oo ah n95 laablaab ah wajiga mashiinka waxsoosaarka iyo soosaarayaasha | HRF
Maxaa loo Doortaa HRF
Mashiinka maaskaro oo aan tol lahayn
1+ 2 Mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka ah oo buuxa
1 + 1 Mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka ah oo buuxa
Mashiinka maaskaroorka qalliinka qalliinka lagu ridi karo oo leh galka dhegaha ee gudaha
Mashiinka alwaax-abuurka dhaliya Xiinka Dhegaha
Mashiinka mashiinka mashiinka-wajiga ah
Mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka ah oo ah mashiinka mashiinka-celiya
Qadka soosaarka mashiinka mashiinka ee KN95
Mashiinka mashiinka mashiinka mashiinka ee loo yaqaan "KN95"
Xirmidda filimka mashiinka ah, xiridda sanduuqa, xiridda iyo xirmidda soosaarka khadadka
Mashiinka maqaarka lagu nadiifiyo ee maaskaro
Mashiinka samaynta dharka Meltblown
Mashiinka samaynta dhar-jilicsan
Qadka soo-saarka dhar-dhaqashada SMS
Qadka soosaarka Cunugga Dhallaanka
Mashiinka wax lagu shubo oo la tuuro
Tayada Yurub oo dhan oo toos ah ayaa n95 mashiinka soosaaray masks wax soo saarka
Mashiinkaani waa mashiin dhan oo-ka mid ah maaskaro isku-laabma oo saddex-geesood leh. Laga bilaabo quudinta maro illaa iyo dhammaystirka qalabaynta alaabada la dhammeystiro, oo ay ku jiraan (xariijinta buundada sare, daabacaad), alxamid meel ah suunka laalaabka, laablaabka, sameynta, alxamida iyo goynta badeecadaha la dhammeeyay, qashin qubka, iyo soosaarka badeecadda, otomatiga soosaarka mashiinka si buuxda ayaa loo xaqiijiyey. (mashiinka oo dhan wuxuu u baahan yahay hal qof oo keliya inuu shaqeeyo).
Heerka caanka ah ee caanka ah 1C
≤3000kg, culeys culeyskiisu yahay ≤500kg / m2
qalab 220VAC ± 5% ； 50HZ power awooda lagu qiimeeyay 17KW
Cadaadiska cadaadiska hawada 0.5-0.8MPa; hawo-mareenka hawada isku buuqsan 300L / min (qulqulka xasilloonida dammaanad leh; saliida iyo biyaha waa inay ahaadaan
Waxqabadka wax soo saarka
1800-2500PCS / H （oo ku saleysan 20 saacadood maalin kasta, maalin kasta
awood ku saabsan 36,000-50,000 gogo '
99% (marka laga reebo waxyaabaha soo gala ee aan u qalmin, kuwa aan habboonayn
Qalabka qalalka saamaynta
≤2% （qalad qalab laftiisa）
Heerkulka 10 一 35 ℃; qoyaan: 5-35% HR
Wax guban kara, gaas wax gubaya, boodh ma leh (nadaafad aan ka yarayn fasalka 100,000)
1. Warshadeena ayaa dabooleysa 35,000 mitir oo laba jibaaran;
2. ISO, CE, FDA soo saartey shahaado;
3. In ka badan 15 khadad wax soo saar oo horumarsan;
4. Xulo alaab-qeybiye caan ah oo caan ah adduunka oo dhan;
5. Khibrad hodan ku ah dhoofinta in ka badan 40 dal.
6. Kooxda xirfadleyda oo ay ka buuxaan xamaasad iyo mas'uuliyad u qaddarinaysa u abuurista qiimaha macaamiisheenna sidii shaygii ugu horreeyay, waxaanan aaminsanahay inaan kugula kori karno iskaashi muddada fog ah.
Hel xigashooyinka hadda !!!
XARUNTA & SHAQADA
1.Ma mid mashiin baa soo saari kara hal cabir?
Sax maaha, waxay kuxirantahay mashiinka.
2. Miyaad haysataa taageerada iibka ka dib?
Haa, waan ku faraxsanahay inaan talo bixinno sidoo kale waxaan helnaa farsamoyaqaanno xirfad leh oo diyaar u ah mashiinka haddii loo baahdo.
3. Sidee loo booqdaa shirkaddaada?
Waxaan kaa soo qaadan karnaa garoonka diyaaradaha Shanghai ama Hangzhou. Ama xarunta tareenka ee Shaoxing North.
4. Maxaad sameyn kartaa haddii mashiinku jabsaday?
Muddada dammaanadda ee makiinaddayadu waa 12month. haddii qaybaha jabay aysan hagaajin karin, waxaan kuu soo diri karnaa qeybaha cusub si loogu badalo qaybaha jabay, laakiin waxaad u baahan tahay inaad adigu iska bixiso. haddii waqtiga damaanada kadib, waxaan ku dhex mari karnaa wadaxaajoodka xalinta dhibaatooyinka, oo waxaan bixinaa taageerada farsamada ee nolosha qalabka oo idil.
5.Ma mas'uul ka noqon kartaa gaadiidka?
Haa, fadlan noo sheeg meesha ay tahay dekeda ama cinwaanka. waayo-aragnimo hodan ah ayaanu u leenahay xagga gaadiidka. 6. 6.Ma waxaad tahay shirkad ganacsi ama warshad?
7. Muxuu qiimahaagu uga sareeyaa kuwa kale?
Sida aan ku sii adkeyneyno in warshadi kastaa waa inay tayada gelisaa meesha ugu horeysa. Waxaan ku kharash gareeynaa waqti iyo lacag sidii aan ku horumarin laheyn sidii looga dhigi lahaa mashiinno badan oo otomaatig ah, sax ah, iyo tayo sare leh. Waxaan hubin karnaa in mashiinkeenu isticmaali karo wax ka badan 20 sano dhib la'aan.
8. Miyaad leedahay injineerro dibadeed?
Haa, kaliya ma siinno injineerrada dibadaha laakiin sidoo kale waxaan bixinaa tababar farsamo.
9.Ma bixisaa si gaar ah?
Sure, waxaan u qaabayn karnaa qalabka iyadoo loo eegayo xogta qaybta dhismaha ee aad bixisay. Waxaan nahay xirfad-yaqaanno biraha sameysan oo sameeya naqshadeeyayaasha iyo soo-saareyaasha.
Hore: N95 wejiga mashiinka wajiga si buuxda ayuu u sameysanayaa sameynta khadka mashiinka
Xiga: Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Maska ee Mashiinka Mashiinka Maskaxda ee "Echo Automatic Survey Team"
N95 waji gashiga wajiga si buuxda oo toos ah u sameynta mashiinka p ...
2-627, Xiangjiang North Road, Degmo cusub, Wuxi, Shiinaha